Ukuba uThixo ulungile, Kutheni Kukho Ukubandezeleka? – 2fish
ekhaya / usindiso / Ukuba uThixo ulungile, Kutheni Kukho Ukubandezeleka?
UThixo akazange adale abantu ukuba ubunzima.
Wenza uAdam noEva, abazali bethu bokuqala, ukuba ingenwe intlungu nokufa.
Ukubandezeleka wamenyelwa ehlabathini xa babuya umva uThixo. Ukungayi, ukubandezeleka kukudala kungekhona kuThixo kodwa umntu, okanye, Nangona, a ngenxa yezenzo woMntu.
Ngenxa yokwahlukana uThixo wabangela ngenxa yokungathobeli uAdam noEva, ukuba bonke abantu kuye kwafuneka ukuba unyamezele ukubandezeleka (ukubona nesisekelo 3:16 yaye uPawulos Ileta eya KwabaseRoma 5:19).
Nakuba thina le inyaniso inqaku yokholo, ngokuqinisekileyo akwenzi kube lula nayiphi na ukujongana ukubandezeleka ebomini bethu. Xa kuhlupheka, sinokuzibona batendeke ukuthandabuza ukulunga kukaThixo yaye ubukho baKhe. Kodwa inyaniso lo mba UThixo obangela ukubandezeleka, Nangona ngamanye amaxesha wenza avumele ukuba kwenzeke.
UThixo ulungile ngokwemvelo kunye, ke, akakwazi ukwenza ububi. Ukuba evumela ububi ukuba kwenzeka, Ukwenza oko kusoloko ukuze azise malunga elungileyo enkulu (Bona uPawulos Ileta eya KwabaseRoma 8:28).
Oku bekunjalo Fall of Man: UThixo wavumela ukuba balahlekelwe uvuyo yasemhlabeni-Eden kuphela ukuba enze kufumaneke kuthi, ngedini loNyana wakhe, ubungangamsha ophezulu eZulwini.
Kukuba uthandaze eGadini eGetsemane ngobusuku bokubanjwa kwakhe, UYesu wasinika umzekelo ogqibeleleyo indlela ukuba sisabele xa kufika ukubandezeleka kuthi. Okokuqala wacela uYise ukuba intlungu kuye. Yena ke wongezelela, "Hayi intando yam, kodwa akho, yenziwe " (Luke 22:42).
Awuthandaze kuwe lo mthandazo kufuneka sithembele kakhulu ukulunga kukaThixo: ukuba osinqwenelela ulonwabo lwethu ngaphezu senze kwaye Uyazi ngokwenene oko kulungele thina. Ukuze sikwazi ukubona, ephambene, ukuba uThixo ongenaluthando sokuvumela ukubandezeleka kugweba Yena evela nengqondo yethu yabantu kuphela. "Ubuphi na wena ukuseka kwam isiseko somhlaba?"Yena esinokubuza kuthi. "Ndixelele, ukuba ukuqonda " (umsebenzi 38:4). Thina nje asikwazi ukubona yonke ukuba uThixo uyakubona. Asinako ukubuqonda zonke iindlela ezifihlakeleyo ngawo Usebenzisa iimeko ezinzima yitshintshe iintliziyo zabantwana bakhe ukuze inguquko ukuphumeza sibe sifezeke. Nangona sikholisa impazamo ukubona le ubomi kuhle wethu, UThixo ubona umfanekiso obanzi, umfanekiso engunaphakade. Ngokufanelekileyo uyayiqonda okulungileyo wethu ukuba injongo koko wadala ukuba: ukuhlala unovuyo naye ngonaphakade ezulwini.
Ukuze angene ebusweni bukaThixo ezulwini kufuna ukuba sitshintshe: ukuba kwethu kobuntu bawile zenziwe ngcwele; ukuze isibhalo sithi, "Ayikho into eyinqambi kungena [izulu]" (bona Incwadi yeSityhilelo 21:27). (Ngaphezulu kwesi sihloko, nceda ubone ikhasi lethu ku Isono, ukuxolela & imiphumela.
Le nkqubo ebungcweleni ibandakanya ukubandezeleka. "Ngaphandle kokuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanga lufe,Uthi: "UYesu, "Ihlala yodwa; kodwa ukuba luyafa, luthwala isiqhamo esininzi. Lowo uwuthandayo umphefumlo wakhe, wolahlekelwa, kwaye lowo uwuthiyayo umphefumlo wakhe kweli hlabathi, wowulondolozela ubomi obungunaphakade " (John 12:24-25).
Yinto ebuhlungu kwahlukanisa attachments zethu engafanelekanga kwizinto zeli hlabathi, kodwa umvuzo ukuba thina balindelwe ehlabathini lizayo sifanele iindleko. Umntwana ongekazalwa ngokuqinisekileyo bakhetha ukuhlala lwazi ezimnyama esibelekweni sikanina. Uye wahlala apho iinyanga ezilithoba; oko kuphela leyinene uyazi. Ukuze kuthathwe kule ndawo ekhululekile kwaye ibiziswe ukhanyiselo lwehlabathi kubuhlungu. Kodwa nguwuphi kuthi ekuzisoleni, okanye ukhumbula, intlungu lokuzalwa kwakhe, kokungena wakhe kweli hlabathi?
Ngoko phi uya iintlungu umcimbi yethu yasemhlabeni kuthi xa siye sangena leyinene ya wezulu. Enoba yintoni iimbandezelo ukuze banezifo ngoku, okanye sinyamezele kwixesha elizayo, liyasomeleza ukwazi ukuba iintlungu obu bomi kuphela okwexeshana-ukuba, kakhulu, nixhobile-nemini ukuba uvuyo bamazulu olupheleleyo obungunaphakade.
Incwadi yeSityhilelo (21:4) uthi, "[uThixo] Azisule uThixo zonke iinyembezi emehlweni abo, kunye nokufa iya kuba sabakho, nabasemva abaya kubakho ukulila nokukhala nobuhlungu, Ngokuba izinto zokuqala zigqithile. "Kwaye le yindlela uThixo unako ukumelana ukusibona, abantwana bakhe abathandekayo, ubunzima apha ixesha emhlabeni. Ngombono wakhe, Kwathi iintlungu zethu asemhlabeni nakusekuqhwanyazeni kweliso, ngoxa ubomi bethu kunye naye ezulwini, ulonwabo lwethu, iya kuba ngaphandle ekupheleni.
I-Christian Ukholo imiselwe ngaphandle zonke ezinye iinkonzo ukuba kuphela ifundisa ukuba uThixo waba indoda–omnye wethu–kubandezeleka aze afe ngenxa zethu izono. "[H]e uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu,"Utsho lo umprofeti uIsaya (53:5), "Watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa; phezu kwakhe ubetho owasenzela yonke, kwaye ngemivumbo yakhe thina kuphiliswa. "
Khumbula, ukuba uYesu, noThixo, kwaba (kwaye ayikho) ongenasono, kodwa yakhe ukuhlupheka babubukhulu ngenxa yethu, kwaye thina, uhlanga lwesintu, zaye obakhululeyo angathabatheki uYesu Kristu.
Kuyinyaniso ukuba ukubandezeleka wakhe ngenxa yethu na kususwe zonke intlungu ebomini bethu. Ngokwahlukileyo koko, njengokuba umpostile uPawulos wabhala Ileta eya KwabaseFilipi (1:29), "Kuye unikwe kuni ngenxa yegama likaKristu kufuneka ungamkholelwa kuphela kodwa kwakhona ubunzima ngenxa yakhe."
ke, ekulingweni zethu esikhuliswe ngakumbi kuKristu kufika nenxaxheba ebuqaqawulini bakhe (ukubona uPawulos Ileta yesibini eya kwabaseKorinte, 1:5). Ngoko ngokusondeleyo UYesu ukuchonga kunye umntu onesifo ogulayo uba umfanekiso ophilayo yaKhe. Mother Teresa wathetha lomthobo sibona ebusweni babo imiphefumlo uludwayinge, abetshiseka igcinwayo imisele ka yaseCalcutta, kanye ebusweni bukaYesu.
ke, Isiva kaKristu iye azisuswanga ukubandezeleka kwethu obuqu, kodwa balenza. Njengoko Pope John Paul Omkhulu wabhala,"Umnqamlezo kaKristu nguye Redemption kufezwa ngokuhlupheka kuphela, kodwa ukubandezeleka kwabantu ngokwayo iye ngentlawulelo " (Salvifici Doloris 19).
Iintlungu ezamiselwa uThixo uvumela ukuba uza kungena ebomini bethu, xa kufundiswa nimanyene kwiimbandezelo zikaKristu on the Cross, bathathe esemgangathweni wokukhulula kwaye kwenziwa kuye uThixo ngenxa usindiso ke lwemiphefumlo. Yeyethu, ke, ukubandezeleka olungenayo injongo; ngokuphawulekayo, ke xa ufuna ubabalo lukaThixo. Iintlungu sisixhobo apho uThixo inakho ukungcwaliswa yethu, ngendlela zokuthena enye ngokomoya usenokuthi.
the Ileta eya kumaHebhere (5:8) isixelela ukuba uYesu, ngokwakhe,
"Wafunda ukulalela oko awazifumanayo." Kwaye le ncwadi iyaqhubeka, “Kuba iNkosi iyabaqeqesha kuye abathandayo, ize imohlwaye unyana owamkelekileyo kuyo. Bunyamezeleni ubunzima, kuba yingqeqesho kufuneka unyamezele. Kaloku uThixo uniphethe njengoonyana; kuba nguwuphi na unyana ongaqeqeshwayo nguyise ayinayo uqeqesho? ... [uYise] usiqeqeshela okusilungeleyo yethu, ukuba sibuxhamle ubungcwele bakhe. Kuba, xa sisephantsi kwayo, ingqeqesho ayivakali buhlungu kunokuba mnandi; kamva lubanika isiqhamo esiluxolo, oko kukuthi sobulungisa, abo baqhelisiweyo lulo.” (12:6-7, 10-11)
Ukwazi ingqiqo ukubandezeleka wokukhulula, Saint Paul wavuma Kwincwadi yakhe eya kwabaseKolose 1:24, "Xa inyama yam ukugqiba oko ubuthathaka ngokuzibandakanya neentlungu ezisilindeleyo zikaKrestu, ngenxa yomzimba wakhe, oko ke iBandla. "
Oku akuthethi, kanjalo, ukuba isiva kaKristu yaba nangayiphi na indlela eyoneleyo. Umbingelelo wakhe ngenxa yethu kukodwa epheleleyo ngokupheleleyo kwaye efficacious. kodwa, ngenxa yokuba uthando lwakhe, UYesu usibiza ukuba sithathe umnqamlezo yethu simlandele; ukuba amcelele uxolo omnye komnye, alingisa kuye, ngomthandazo kunye nokuhlupheka (ukubona Luke 9:23 yaye uPawulos Ileta yokuqala eya kuTimoti 2:1-3).
Ngokufanayo, Kwincwadi yakhe yokuqala (3:16), John Saint ubhala, "Ngale nto silwazile uthando, kuba yena wasincamela ubomi bakhe ngenxa yethu; ke sifanele ukubancamela abazalwana ubomi bethu. "
"Lowo ukholwayo kum, naye lowo uya kwenza imisebenzi endiyenzayo mna,"Itsho iNkosi; "Kunye nemisebenzi emikhulu kunale uya kuyenza, ngokokuba ndisiya kuBawo " (John 14:12). ke, UYesu ufuna inxaxheba yethu kumsebenzi ngentlawulelo kungekhona kokokunyanzelwa, kodwa ngenxa yothando, ezifana ngayo uyise wasemhlabeni ukhangela ukuquka unyana wakhe kwimisebenzi yakhe. bambongozayo kwethu omnye komnye, kananjalo, ineentlobo ulamlo kaKristu unique kwaye yedwa kunye noThixo (bona Incwadi First uPawulos ukuba uTimoti, kwakhona, 2:5).
Ukuze uqiniseke, konke esikwenzayo kuxhomekeke phezu koko sele kwenziwe kwaye bekungenakwenzeka ngaphandle kuyo. Njengokuba uYesu watshoyo kuYohane 15:5, "Mna ndingumdiliya, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum, nam ndihleli kuye, nguye luthwala isiqhamo esininzi, ngokuba, ningekum, aninakwenza nto. "Ngoko, Kuyinto ukuzimisela kwethu ukubandezeleka ngenxa kuye, naye lowo "eswele,"Ukusebenzisa elithi uPawulos, kwiimbandezelo zikaKristu.
Isimemo ukuthatha inxaxheba ukumanyanisa iintlungu zethu yakhe usindiso lwethu kunye usindiso kwabanye yomsebenzi kaKristu wokukhulula ngenene intuthuzelo omangalisayo. Saint Thérèse of Lisieux wabhala:
“Emhlabeni, xa ndivuka kusasa Ndandikade ndicinga ngento mhlawumbi kuya kwenzeka nokuba sikholisa okanye olucaphukisayo ngexesha lasemini; ukuba ndithe ndiyibona uzama kuphela iziganeko Ndesuka dispirited. Ngoku kakhulu ngenye indlela: Ndicinga ubunzima kunye nokuhlupheka silindele me, kwaye avuke nemihlali ngakumbi yaye ezele nesibindi okukhona kwangaphambili amathuba yokubonisa uthando lwam uYesu ... . Ke ndithe ndamanga, Umnqamlezo wam ndiwubeke kakuhle kwi nomluko gama endinxiba ngayo, ndithi kuye: 'UYesu My, uthe wasebenza ngokwaneleyo walila ngokwaneleyo ngexesha leminyaka emithathu yaye-amathathu yobomi bakho kulo mhlaba abahluphekayo. Khawuthabathe ngoku ekuphumleni kwakho. ... Ithuba lami ngayo ukubandezeleka ukuze alwe '” (Ngamacebo uyakhumbula).
Xa kuhlupheka ngokumanyene neNkosi uYesu ethembeni–nakuba buhlungu–eve ubunzima ngaphandle kwakhe ebabayo ziyalambatha.
Kwezo meko, akukho xabiso ekubandezelekeni, yaye ihlabathi ubaleka kulo–efuna ukuphepha kuwo onke iindleko–okanye eligxeka lo mntu mashwangusha. Umzekelo, abanye bona intlungu kwaye ufuna njengezohlwayo esiwiswa nguThixo phezu angenalo, okanye ukubandezeleka nokufa ekugqibeleni ukusuka, bathi, umhlaza wemiphunga njengoko bazisa kwi ukungabikho yokholo. Inyaniso, kukho abantu abakholelwa ukuba uThixo uneenjongo wonke ikholwa ukuba baphile free ngokupheleleyo ekuguleni kunye nezifo; kuxhomekeke kumntu isigqibo okanye nokuba Ukuba ulihlwempu sisono xa uThixo uthembisa ukuchuma.
the Bible, kanjalo, ayingqinelani ngokupheleleyo lo mbono naliphi na inani lamaxesha, kuquka kwiNtshumayelo le Mount Matthew 5, “Banoyolo abo balambela banxanelwe ubulungisa, kuba baya kwaneliswa,” yaye Luke 6:20, isi, "Ninoyolo nina mahlwempu ...,"Yaye" Yeha nina zityebi " (Luke 6:24; cf. Matthew 6:19-21; i Incwadi kaYakobi 2:5).
umsebenzi, lowo iBhayibhile ichaza ngokuthi "indoda egqibeleleyo, ethe tye" (umsebenzi 2:3), ukugula wahlupheka, kokufa kwabathandekayo, kunye ukuphulukana nezinto zakhe.
I Virgin Mary, ngubani wayengenasono (Luke 1:28), ukungafunwa wahlupheka, namakhaya, intshutshiso, kunye nokulahlekelwa noNyana Wakhe "ikrele liya kuwutyhutyha umphefumlo wakho nabo,"USimon wayeyityhilele kuye (Luke 2:35).
UYohane umbhaptizi, siphu- uYesu, "Enxibe ingubo yakhe ibiyeyoboya benkamela," waza wadla 'iinkumbi nobusi basendle " (Matthew 3:4). UTimoti wabandezeleka evela izifo esiswini ezingapheliyo (ukubona uPawulos Ileta yokuqala eya kuTimoti 5:23); yaye uPawulos kwafuneka ashiye yakhe intsebenziswano umsebenzi, uTrofimo, ngasemva ngenxa yokugula (ukubona uPawulos Second Ileta eya kuTimoti 4:20).
Ngaphezu, xa Peter Saint walinga uYesu ukuba ukudela isiva, uYesu wamphendula, "Suka uye emva kwam, uSathana! Usisikhubekiso kum; ngokuba wena hayi kwicala kaThixo, kodwa abantu " (Matthew 16:23).
inyaniso, naziphi na iinzame ukufumana uzuko ngelixa ngokudlula Cross yeedemon ngokwendalo (cf. Tim Ukudla, ucaphule Fulton J. Ndileka, "Iimpendulo zamaKatolika Live" inkqubo kanomathotholo [EyoMdumba 24, 2004]; ziyafumaneka kwi catholic.com).
Ngasekupheleni kobomi bakhe, i Peter efanayo, owayekade sele wakohlwaywa yiyo ngoYesu ngokufuna ukuba ukuthintela ukubandezeleka, owamiswayo ukuba ethembekileyo:
"Kule [ifa lasezulwini] ukuba nemihlali, naxa phofu okwangoku ninyanzelekile ukuba nibe kufuneka kubandezeleka kwezilingo ngezilingo, ukuze ngokwenene ukholo lwakho, oluxabiseke ngaphezu kwegolide lumelwe kukucikidwa nangona konakalayo iyacikidwa ngomlilo, ukuze, luwuphuphumise umbulelo wendumiso nozuko nembeko ekutyhilekeni kukaYesu Kristu. " (uPetros First Letter 1:6-7)
ke, Ngaba sancedakala phofu?
Ukuze siphendule lo mbuzo, sinako ukukhangela Saint Paul Kwincwadi yakhe eya kwabaseRoma 8:18: "Ndigqiba kwelithi, iintlungu zeli xesha langoku ndizibalela kukufanele azinakufaniswa nobuncwane esiza kubuxhamla kuthi."
In ndaba, asimele silibale umvuzo: ukuba ngenye imini, ngobabalo lukaThixo, ngamnye kuthi apha uya kuyibona iNkosi uYesu Kristu eBukumkanini Bakhe; nanko ubuso bakhe ezikhanyayo; liveni ilizwi lakhe yeengelosi; ngange izandla zakhe engcwele neenyawo, uhlatywe ngenxa yethu. Kuze ngaloo mini, sinako umemeze ngathi Saint uFrancis waseAssisi ngo Indlela of the Cross, "Thina sidumise Wena, O Kristu, kwaye thina Ubusisa, ngokuba yi Cross oyiNgcwele wakho owukhululeyo ihlabathi. Amen. "